Prof Mohamed Abdi Gandi oo ku Geeriyooday Dalka Faransiiska - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Prof Mohamed Abdi Gandi oo ku Geeriyooday Dalka Faransiiska
By admin April 18, 2021 61
Waa Kuma Prof Marxuum Mohamed Abdi Gandi, Taariikh Kooban.
Waxaa dalka Faransiiska ku geeriyooday Prof Mohamed Abdi Gandi, oo ahaa aqoonyahan iyo taariikhyahan si weyn looga yaqaanay gudaha Soomaaliya.
Haddaba, Waa Kuma Prof Mohamed Abdi Gandi Gandi?
Prof Mohamed Abdi Gandi, wuxuu dhashay sanaddii 1949-kii, waxbarashadda dugsigii sare wuxuu ku qaatay Dugsiga Jamaal Cabdinasir, ee Muqdisho, kadib Deeq waxbarasho ayaa loogu diray dalka France, wuxuuna tagey Faransiiska gaar ahaan jaaamacadda Besançon University sanadkii 1972.
Prof Gandi waxa shahaadooyin siiyay ururka the International Baccalaureate oo ah urur hogaamiyaasha tacliinta caalamka sharfa xaruntiisuna tahay Geneva, Switzerland.
Alle haw naxariisto Prof Gandi maanta ayuu ku Geeriyooday Dalka Faransiiska.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka oo Xafiiskiisa ku Qaabilay Safiirka ingiriiska
Wasiirka Warfaafinta Galmudug oo shaaciyay in ku dhawaad 60 looga dilay argagixisada Al-Shabaab meel u dhaw Camaara
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay oo ka warbixiyay xaaladda guud Soomaaliya